ဘာရိန်းလူပျိုပုဂ္ဂိုလ်ကုမ္ပဏီ (SPC) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
ဘာရိန်း SPC / လူပျိုပုဂ္ဂိုလ်ကုမ္ပဏီ
တစ်ဦးကဘာရိန်းလူပျိုပုဂ္ဂိုလ်ကုမ္ပဏီ (SPC) နိုင်ငံခြားသားများတစ်ခုတည်းလူတစ်ဦးကပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီပေးထားပါတယ်။ ကိုယ့်တစ်ဦးတည်း proprietorship ထက်ပိုပြီးတစ် SPC အနေနဲ့အမှန်တကယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
2001 ၏ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကုမ္ပဏီများဥပဒေ SPC ရဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း, မှတ်ပုံတင်, စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများအမျိုးအစားများနှင့်ရပ်စဲအုပ်ချုပ်။ ဤပညတ်တရားကိုနိုင်ငံခြားသားများတစ် SPC အတွက်ရှယ်ယာ 100% ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုပါတယ်။
သူတို့ရဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်ကတစ်ဦးကို dual တရားရုံးစနစ်အပျေါမှာအခြေခံသည်:
1 ။ အစ္စလာမ့်ရှရီယာတရားရုံးများ - သူတို့အပါအဝင်မွတ်စ်လင်နှင့် ပတ်သက်. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်အတူကိုင်တွယ်: အိမ်ထောင်ရေး, ကွာရှင်းနှင့်အမွေဥစ္စာ။
2 ။ မြို့ပြတရားရုံးများ - အီဂျစ်စနစ်ကမှပေါ်ပေါက်လာပေမယ့်ခေတ်သစ်ပြင်သစ်တရားရေးစနစ်အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတရားရုံးများအားလုံး, အရပ်ဘက်စီးပွားဖြစ်နှင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုင်တွယ်။
အဆိုပါ "ဘာရိန်း၏ဒမ်း" ဟုကာတာမြို့အနီးပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့နှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျမှအနီးကပ်တည်ရှိသည်။ ရေနံ 1932 ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အစဉ်အဆက်ကတည်းကအဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းဘာရိန်းဟာအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတိုင်းပြည်အောင်ရေနံထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
1913 ကတည်းကဘာရိန်းစစ်ရေးကာကွယ်မှုများအတွက်ပြန်လာအတွက်ဗြိတိန်အစောငျ့အခဲ့ဗြိတိသျှအရှေ့အလယ်ပိုင်းပင်လယ်ကွေ့ဒေသတစ်ခိုင်မာတဲ့ခြေကုပ်ရယူခဲ့သည်။ 1971 ခုနှစ်, ဘာရိန်းဗြိတိသျှထံမှလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပေမယ့်အစဉ်အဆက်ကတည်းကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။ အင်္ဂလိပ်ဒုတိယရုံးသုံးဘာသာစကားသည်ကာလတွင် Arabic အဘိဓါန်တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။
၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကမိမိတို့ရှင်ဘုရင်အောက်မှာတစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းပါလီမန်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်အဖြစ်ဖော်ပြနေသည် Hamad bin ကိုဟေရှာအယ်လ် Khalifa ။
တစ်ဦးကဘာရိန်းလူပျိုပုဂ္ဂိုလ်ကုမ္ပဏီ (SPC) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်:
• ပိုင်ဆိုင်နိုင်ငံခြားရေး 100%: တစ်ဦး SPC အတွက်ရှယ်ယာအားလုံးနိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
• အဘယ်သူမျှမအခွန်: SPC ရဲ့အခွန်မဆိုအမျိုးအစားကနေပြီးပြည့်စုံသောကင်းလွတ်ခွင့်ရတာကိုနှစ်သက်ကြတယ်။ သို့သော်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်အားလုံးအခြားသူများကိုသူတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရပါမည်။
• တဦးတည်းပိုင်ရှင်: SPC ရဲ့တစ်ခုသာနိုင်ငံခြားသားဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းပိုင်ရှင်ရှိသည်။
• တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: တစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားရေးမှူးပိုင်ရှင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: ပိုင်ရှင်ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုသူသို့မဟုတ်သူမ၏ရှယ်ယာမြို့တော်အလှူငွေဖို့ကန့်သတ်သည်။
• အင်္ဂလိပ်: ဗြိတိန်ကာကွယ်ရှင် 58 နှစ်ကြာပြီးနောက်, အင်္ဂလိပ်အရာရှိကဒုတိယ language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဘာရိန်းလူပျိုပုဂ္ဂိုလ်ကုမ္ပဏီ (SPC) အမည်
SPC ရဲ့ဘာရိန်းအတွက်အခြားဥပဒေရေးရာ entity ရဲ့နာမညျကိုဆင်တူမကုမ္ပဏီအမည်ကိုရွေးချယ်ရမည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအမည်စကားလုံးများကို "လူပျိုပုဂ္ဂိုလ်ကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ် "SPC" ၏ယင်း၏အတိုကောက်ကို အသုံးပြု. ဖြစ်စေရပါမည်အဆုံး။
တစ်ခုတည်းကသဘာဝလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်တစ်ခုတည်းကော်ပိုရိတ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စေဘာရိန်းအတွက် SPC ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါတယ်နေသောတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများအမျိုးအစားများ၏တစ်ခုတည်းသောတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဘဏ်လုပ်ငန်း, အာမခံလုပ်ငန်းနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ကြသည်။ SPC ရဲ့နိုင်ငံတကာမှာဒေသခံစီးပွားရေးထိတွေ့ဆက်ဆံအဖြစ်ဖြစ်နိုင်သည်။
တစ်ဦး SPC များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်, လျှောက်ထားသူဖြစ်ရပါမည်:
• 18 အသက်အရွယ်နှစ်သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေ (အချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုအနည်းဆုံး 21 နှစ်ရှိပြီလိုအပ်ပါတယ်); •
အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများတစ် SPC ဖွဲ့စည်းရန် application တစ်ခုနှင့်အတူထည့်သွင်းထားရပါမည်:
•ဒါရိုက်တာရဲ့ (တည်ထောင်သူအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောလျှင်) ဘာရိန်း ID ကို (ကနိုင်ငံသားပါလျှင်) သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် non-နိုင်ငံသားလျှင်မိတ္တူ;
• Authorized လက်မှတ်ရေးထိုးရဲ့ဘာရိန်း ID ကိုမိတ္တူ (ကနိုင်ငံသားလျှင်) တည်ထောင်သူသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားရေးမှူးထံမှကွဲပြားခြားနားလျှင်။ အကယ်. non-နိုင်ငံသား, ထို့နောက်တစ်ဦးသည်သူ၏၏မိတ္တူသို့မဟုတ်သူမ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်;
လျှောက်ထား၏ကိုယ်စားလှယ်အားဖြင့်ရှေ့နေများ၏•မူရင်း notarized ပါဝါ;
•သစ်ကို SPC များအတွက်အသင်းမူကြမ်းစာချွန်လွှာ၏မိတ္တူ;
•သစ်ကို SPC များအတွက်အသင်းမူကြမ်းဆောင်းပါးများ၏မိတ္တူ;
•တစ်ဦးလူပျိုပုဂ္ဂိုလ် Company ၏မူရင်းကြေညာစာတမ်း,
•တစ်ဦး SPC ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကို authorize ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ (ဒီဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏တစ်ဦးတည်းသောဘုတ်အဖွဲ့အဖြစ်တည်ထောင်သူများကလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်) ကအဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်မိတ္တူ;
• (တည်ထောင်သူဖြစ်နိုင်သည့်) အ SPC များအတွက်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်ခွင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခန့်အပ်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ချက်မိတ္တူ။
တစ်ဦး SPC ၏ပိုင်ရှင်များမှသာမိမိအများ၏အတိုင်းအတာဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီမှသူမ၏မြို့တော်အလှူငွေမှတာဝန်ယူမှုရှိသည်။
တဦးတည်းရှယ်ယာရှင် (တည်ထောင်သူ) ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါရှယ်ယာရှင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာနေထိုင်နှင့်မည်သည့်တိုင်းပြည်များ၏နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခုတည်းလူတစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကတည်းကထုတ်ပေးနိုင်သည့်ရှယ်ယာ၏တစ်ခုတည်းသောအမျိုးအစားမှတ်ပုံတင်ထားသောရှယ်ယာဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ SPC အများပြည်သူရှယ်ယာထုတ်ပေးလို့မရပါဘူး။ ထို့အပြင်တစ်ဦး SPC debentures သို့မဟုတ်ညှိနှိုင်းရမ်းထုတ်ပေးရန်ထံမှတားမြစ်သည်။
တစ်ဦးတည်းသာဒါရိုက်တာ SPC စီမံခန့်ခွဲခန့်အပ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်ဦးတည်းသောဒါရိုက်တာဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါရိုက်တာကအခြားနိုင်ငံများတွင်နိုင်ငံသားများဖြစ်နဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဒေသခံမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်သည်အဘယ်သူ၏ရုံးက SPC များအတွက်မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာဖြစ်နိုင်သည်ခနျ့အပျထားရမည်ဖြစ်သည်။
လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော် 50,000 Bhd (ဇူလိုင်လ, 133,000 ၏အဖြစ် $ 2017 အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ညီမျှ) ဖြစ်ပါသည်။
ဘာရိန်းတစ် SPC အပေါ်သို့သမျှမျှအခွန်ချမှတ်ထားတဲ့။ ဤသည်တို့ပါဝင်သည်: ဝင်ငွေခွန်, ကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်, မြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်, ဆုကြေးဇူးကိုအခှနျ, အမွေဥစ္စာကိုအခှနျ, ဥစ္စာဓနအခွန်နှင့်အခွန်ရှောင်အခွန်အခများ။
ဘာရိန်းကရရှိထားသောစည်းစိမ်၏အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ရေနံထုတ်လုပ်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းမှလာနေသောကြောင့်အဘယ်သူမျှမအခွန်အခများဟာ SPC များအတွက်တည်ရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: အမေရိကန်အခွန်ထမ်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်လူတိုင်းကသူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေထုတ်ဖော်ရမယ်ရုံကဲ့သို့ IRS ကိုအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
တစ်ဦးကဘာရိန်းလူပျိုပုဂ္ဂိုလ်ကုမ္ပဏီ (SPC) ကိုအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်း: ပြီးပြည့်စုံသောနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုမရှိအခွန်ငွေ, တစ်ဦးတည်းသောဒါရိုက်တာဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်, အင်္ဂလိပ်အရာရှိကဒုတိယဘာသာစကားနှင့်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုဖြစ်ပါတယ်။